HomeWararka Maanta SomaliskaBarlamaanka Sweden oo loo gudbinayo Mooshin la xiriira Siyaasada Socdaalka ee Sharciyada ku meel gaarka
October 5, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Xisbiga Libaraalku ma doonayo inuu sugo inta xisbiga S iyo MP ka heshiinayaan siyaasadda socdaalka. Xisbiga ayaa hada cadaadis saaraya dowlada ayagoo u gudbinaya baarlamanka mooshin ay ku jiraan dhamaan 26 soo jeedin ee ka soo baxday gudiga socdaalka warbixintiisii ​​ugu dambeysay.
– Maadaama aysan dowladdu ku guuleysan doonin soo bandhigida heshiiska waxay u fikirayaan si ka duwan arrimaha socdaalka, xisbiga Libaraalka ayaa qaadaya mas’uuliyadda ah inuu soo bandhigo soo jeedinta baarlamaanka, ayay tidhi hoggaamiyaha xisbiga Liberal Nyamko Sabuni.
Sharciga socdaalka Sweden ee hada wuxuu dhacayaa bisha julaay ee sanadka soo socda. Illaa iyo hadda, isku daygii xisbiyadu ku doonayeen inay ku heshiiyaan ayaa markii dambe fashilmay. Arintaan ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuurtay dowlada maadama xisbiyada Socialdemokraterna iyo xisbiga cagaaran ay isku khilaafeen sida loo wado.
26-ka talo soo jeedin ee laga sameeyay gudiga socdaalka waxay saranyihiin miiska dowlada si loogu diyaar garoobo.
Xisbiga Libaraalka ayaa hadda ka dhamaaday dulqaadkii, waxayna u maleynayaan inay waqti dheer qaadatay. Xisbigu wuxuu rumeysan yahay in soo-jeedinta socdaalka mar horaba la baaray taasna ay dib u dhigistu sabab u tahay xisbiyada dowladda oo aan oggolaan karin
Xisbigan ayaa hada soo koobaya xukuumada isla markaana u gudbinaya baarlamaanka mooshin ka kooban dhamaan 26-kii hindise ee asalka ahaa ee ay soo gudbiyeen gudiga socdaalka.
– Tani waa waddo aan ku sii soconno si dowladda, khilaaf ka dhex jira xisbiyada loo dhameeyo, , si ay sharci cusub uga hesho bisha Luulyo ka hor, ayay tidhi Sabuni.
Xisbiga Liberalerna ayaa filaya in soojeedimaha kaladuwan ee mooshinka socdaalka lagu taageeri doono aqlabiyadda kadis ah.